Samsung U Flex, ekweisi egwuregwu na nnyemaaka Bixby | Akụkọ akụrụngwa
Samsung U Flex, ekweisi egwuregwu na onye enyemaka Bixby
N'eziokwu, Samsung anaghị ezu ike. You makwaara akụkụ nke teknụzụ na-eme ka ndị ọrụ nwee mmasị. Ọ bụ ya mere na mgbakwunye na ịkụ nzọ na ihe ọhụrụ na mpaghara mkpanaka ma ọ bụ na ngalaba nke audiovisual na nnukwu telivishọn nwere mkpebi dị mma, ọ bụkwa ha nzọ na ngwa egwuregwu nwere ike iso smartphones .
Nke a bụ otú Samsung U Flex, ekweisi egwuregwu dị iche iche, nwere ezigbo ụda na ohere ịkpọku onye enyemaka onwe ya Bixby, ihe okike kachasị ọhụrụ nke ndị Eshia. Want chọrọ ịmatakwu ha nke ọma? Ka anyị gaa n'ihu ịchọpụta ihe ọzọ ha na-enye anyị.
Ihe mbụ ị kwesịrị ịma bụ na ha bụ ikuku - ha na-eji teknụzụ Bluetooth. Na mgbakwunye, ha nwere akụkụ abụọ. Na Samsung U Flex nwere eriri isi nke, n'adịghị ka ụdị ndị ọzọ, etinye ya n'olu. Na mgbakwunye, ọ na-agbanwe agbanwe iji dozie onye ọrụ ọ bụla na ọnọdụ ọ bụla, si otú a na-enye gị ohere ịme ụdị egwuregwu niile. Ka ọ dị ugbu a, ntị abụọ ahụ si na nsọtụ abụọ wee pụta maka ebe dị mfe ma dịkwa mfe na ntị.
Ka ọ dị ugbu a, ụda nke ejiri n'aka site na ụlọ ọrụ ahụ bụ Adịchaghị. Samsung U Flex nwere okwu abụọ: 8-millimita twetter na 11-millimita woofer.. A na-ahụkwa njikwa ndị ahụ na nsọtụ isi. Enwere ike ịme ndekọ olu na ha; mepụta ndetu; jiri Samsung ahụike dị egwu ma ọ bụ kpọọ onye enyemaka Bixby.
N'ikpeazụ, gwa gị nke ahụ obodo ndi Samsung U Flex di ihe dika awa iri n'usoro - adighi nma ma oli. Na mgbakwunye, ha na-eguzogide ọsụsọ na nsị mmiri. Yabụ ihu igwe agaghị abụ ihe ngọpụ iji gaa eme egwuregwu. The n'ire price nke ndị a Samsung ekweisi bụ 79,90 euro ma ị nwere ike nweta ha na Spen.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Samsung U Flex, ekweisi egwuregwu na onye enyemaka Bixby
Lelee, nke ahụ bụ aha ntanetị vidiyo nke Facebook
Acer Chromebook 11 C771, dị mma, mara mma ma dịkwa ọnụ ala maka gburugburu ụlọ akwụkwọ